I-15 YEMBONO YEZIPHO ZOBUDLELWANE OBUDE KAKHULU KUYE KUNYE NE-2019 - UBUDLELWANE
I-15 yeMbono yeZipho eziBalaseleyo zoBudlelane ngeZipho ngo-2019
Eyona / Ubudlelwane
Nabani na owakhe waphila ngaphandle kwabanye ababalulekileyo uyazi ukuba ukunika isipho esifanelekileyo sobudlelwane obude obude yinto encinci yobugcisa. Ngandlela-thile, kufuneka babe; xa ungeke ube kunye kunye, ukubonisa iqabane lakho ocinga ngabo kunokunceda ukuqinisa ubudlelwane bakho, utshilo uTerri Orbuch, PhD, umbhali Amanyathelo ama-5 alula okuThatha uMtshato wakho ukusuka kokuLungileyo ukuya kokuKhulu kunye noprofesa kwiYunivesithi yase-Oakland eMichigan. Ukuze izibini ezikude ziziva zisondele, kufuneka zinike izipho ezincinci rhoqo kwaye rhoqo. Oku kuthi, 'Nangona singekhe sihlale kwidolophu enye okanye nakwilizwe elinye, ndicinga ngawe rhoqo,' utsho.
Xa izipho zithatha intsingiselo enkulu, ukukhetha eyona igqibeleleyo kunokoyikisa. Kodwa u-Orbuch uthi inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni ukufumana isipho esifanelekileyo sobudlelwane obude: iqabane lakho. Rhoqo xa sikhetha izipho, sicinga ngento esingayifuna kwaye siyithenge loo nto, utshilo u-Orbuch. Endaweni yoko, zibeke ezihlangwini zabo kwaye ubuze ukuba bangathanda ntoni na njengesipho. Oku kunokunceda izibini zive zixakeke ngakumbi ngaphandle kweemayile ezizigcinayo zahlukene.
Ngaba ufuna ukukhuthazwa? Ezi ngcinga zinengqiqo, ezinobuhlobo, kwaye zihlala zenziwe nguwe ziya kulwenza ulwalamano lwakho lomelele kunakuqala.
Ngamanye amaxesha, konke kuthatha inqaku elicingayo ngeposi. Oku kuthengiswa kakhulu ngu-Etsy kukuxelela ngoluhlobo: Unokuba kude kude, kodwa uhlala usengqondweni yomnye nomnye!
2 Kutheni ndikukhumbula Gcwalisa incwadi yothando IAmazon amazon.com$ 11.04 THENGA NGOKU
Ukuba unendlela enamagama, unokugcwalisa incwadi yonke ngokuchaza zonke iindlela olithanda ngazo iqabane lakho. (Kwaye ungakhathazeki, le ncwadi ineetoni zokuqalisa incoko ukunceda apha endleleni.) Ikwanika isipho esihle kakhulu kubazali nakubahlobo.
3 Keychain eyenzelwe wena Etsy etsy.comIidola ezingama-27.90 THENGA NGOKU
Cinga ngako: Ujonge iringi yezitshixo ubuncinci kabini ngemini-ngale ndlela, baya kuba nesikhumbuzo esincinci sokuba niyakubuya kunye ngexesha elinye. Umenzi we-Etsy unokwenza ngokusesikweni esi sitshixo kunye namazwe akho, kwaye abavavanyi bathi ikhangeleka intle kakhulu i-IRL.
4 Ibhokisi yothando ejikelezayo yentliziyo yomthunywa Iimpahla ezingaqhelekanga uncommongoods.com$ 100.00 THENGA NGOKU
Le bhokisi yaphefumlelwa sisibini esasikude seminyaka-umfundi we-MIT wayefuna ukufumana indlela yokuthumela uthando lwakhe kwintombi yakhe ebuyela eFrance. Khuphela usetyenziso oluhamba kunye nalo ukuthumela umyalezo, owenza ukuba intliziyo ijikeleze ukuze 'ulumkise' iqabane lakho. Kuya kufuneka bavule ibhokisi ukuze bafunde inqaku lakho. Intle kakhulu!
5 Isibindi seLatitude yeNqanaba Etsy etsy.com$ 17.00 THENGA NGOKU
Esinye sezipho ezithengisa kakhulu ze-Etsy ngaphezulu kwe-11,000 yohlolo oluqinisekileyo, le bracelet isebenza emadodeni nakwabasetyhini kwaye inokwenziwa ibekho kwindawo echanekileyo yendawo, njengalapho udibene khona!
6 Ubudlelwane obude beBusuku obuPrintwayo Etsy WethuLoLaLiYaWa etsy.com$ 108.00 THENGA NGOKU
... okanye, jonga phezulu kwaye uthumele umntu omthandayo uprinte ngesibhakabhaka ebusuku ngomzuzu obalulekileyo kubudlelwane bakho (ixesha lokuqala uthe 'Ndiyakuthanda' emnxebeni, mhlawumbi). Isicatshulwa esingezantsi sithi, 'Umgama uthetha okuncinci xa umntu ethetha lukhulu.'
yintoni intsingiselo ka-777
7 Isipaji samadoda esenzelwe wena Etsy etsy.comI $ 32.98 THENGA NGOKU
Kukuye naphina apho aya khona (into enethamsanqa!), Ngoko ke monogram inqaku elikhethekileyo kuye ngaphakathi. Yithengisa kakhulu kwi-Etsy, enophononongo oluphantse lwenziwa malunga ne-2000.
8 Umzobo womthi okroliweyo Etsy etsy.com$ 49.99 THENGA NGOKU
Enye into enethamsanqa uhlala ekufutshane nayo: iwotshi yakhe. Mnike le nto yokuhamba nayo nantoni na ekhethiweyo evela kumenzi we-Etsy enee-2500 zokuhlolwa kweenkwenkwezi ezintlanu.
9 Setha ibrashi yamazinyo Iimpahla ezingaqhelekanga uncommongoods.com$ 34.00 THENGA NGOKU
Lulwalamano oluphambili: Ukushiya ibrashi yakho yamazinyo kwindawo yabo. Mnike umnini webrashi yakhe ngenqaku ongekhe ulinde de batyelele kwakhona.
10 Amaqabane ethu amaXesha: I-100 yokuQala yokuQala yokuQala yeNCoko IAmazon amazon.com$ 18.95 THENGA NGOKU
Izibini zemigama emide okuninzi yexesha kwiSkype okanye kwiFaceTime. (Kodwa izibini ezininzi ezihamba kunye kamva ziyazikhumbula ezi ncoko ngothando, kuba zazisazana kakuhle.) Sebenzisa ezi ziqalo zencoko ekubambeni kude kube sezinzulwini zobusuku, okanye kuhambo lwendlela.
Shumi elinanye Iindlela eziwela umnqamlezo Etsy etsy.com$ 43.81 THENGA NGOKU
Mnike into anokuhlala eyigcina entliziyweni yakhe: Le yomqala, enokukrolwa kwigolide, iphakame ngegolide, okanye isilivere, inazo zombini ii-inishiyali zakho ngexesha elinye. Phantse abahlalutyi abangama-4,000 bayinika iinkwenkwezi ezintlanu.
12 Umgexo owenziwe ubuqu Etsy etsy.com$ 27.10 THENGA NGOKU
Olunye ukhetho olumnandi kwi-Etsy, le ikunika inketho yesilivere, igolide, kunye negolide evukileyo-kodwa kule meko, ukhetha ilizwe lakho kwaye uqale okokuqala ngentliziyo embindini. Abavavanyi bayo abangama-1,2000 bayinika iinkwenkwezi ezintlanu.
13 Imephu yokuDityaniswa kweMephu emide Etsy etsy.com$ 49.00 THENGA NGOKU
Le mephu imibalabala ijika iindlela ezindala ezigugileyo zibe sisiqwenga sobugcisa onokuyibonisa ixesha elide emva kokuba ekugqibeleni ulele phantsi kophahla olunye. Ngaphantsi, unokongeza umyalezo wakho.
14 Ngaphantsi kwebhotile yoMyalezo weSibhakabhaka Etsy etsy.com$ 12.77 THENGA NGOKU
Phantse abathengi abangama-4,000 be-Etsy banesiphiwo somyalezo omncinci kwibhotile Khetha phakathi kweetoni zemiyalezo ebhalwe kwangaphambili efana 'nokusoloko kuphantsi kwesibhakabhaka esinye' okanye 'Ndiyazi ukuba ndiyathandana.' Ungabandakanya igama lakho kunye nelomntu omthandayo kunye nomhla okhethekileyo.
Shumi elinantlanu Amatikiti neehotele UDaniel Grill / Imifanekiso yeTetraImifanekiso kaGetty
FUMANA IZIGANEKO NGESIXEKO
Xa nisiya kubona omnye nomnye, mhlawumbi nisiya kwindawo ye-S.O okanye kwindawo enye. Hlanganisa izinto ngokuthenga amatikiti kumdlalo wezemidlalo okanye kwikhonsathi kwisixeko esitsha onokuphonononga kunye. Ayibonisi kuphela ukwabiwa phakathi kwenu nobabini, kodwa ivumela ithuba lokuba kunye, utsho ugqirha wezengqondo onelayisensi UJohn Mayer , PhD, umbhali we Ukufaneleka kosapho: Fumana ibhalansi yakho ebomini . Inenjongo ezimbini, oko kukuthi, ukumelana nomgama ngesipho esicingayo kwaye okwesibini kuya kunizisa kunye.
Inani leengelosi ezingama-222
ingelosi # 555
lithetha ntoni inani lama-666 kumanani eengelosi